तपाईंको साइटमा अहिले के भइरहेको छ? | Martech Zone
तपाईंको साइटमा अहिले के भइरहेको छ?
सोमबार, अगस्ट 15, 2011 बिहीबार, अक्टुबर 27, 2011 Douglas Karr
हाम्रा धेरै ग्राहकहरु समीक्षा गर्छन् विश्लेषण दैनिक वा साप्ताहिक कहिलेकाँही तिनीहरू नतिजाबाट छक्क पर्दछन्। हुनसक्छ यो अर्को ब्ल्ग, प्रकाशन वा सामाजिक बुकमार्किंग साइटमा उल्लेख गरिएको थियो। समस्या यो हो कि उनीहरूले यसलाई देख्दैनन् अब... तिनीहरूले यो घटना पछि to देखि २ hours घण्टा सम्म देख्छन्।
धेरै मार्केटिंग समय र गति को बारे मा छ। ट्राफिकमा स्पाइक लामो गर्न को लागी प्रायः ढिलो हुन्छ। तपाइँले यसलाई तपाइँको एनालिटिक्स प्याकेजमा देख्नुभएपछि यो सकियो। वास्तविक समय विश्लेषण यो रणनीति को कुञ्जी छ। एक वास्तविक समय मा लगानी विश्लेषण उत्पादन जस्तै पुनर्विग्रह (म रेनिविगोरेटको संस्थापक प्रयोगकर्ता थिएँ - हालसालै हाम्रो ग्राहकले खरिद गरेको थियो वेबट्रेंडहरू) तपाईंलाई आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ।
यस जस्तो अनुप्रयोगको लागत नाममात्र हो ... प्रति महिना $ १० बाट शुरू भयो। केहि सुविधाहरूलाई दिइएको यो सानो मूल्य हो। कति व्यक्ति प्रति घण्टा आधारमा तपाइँको साइट भ्रमण गर्दै छन् भन्ने हेर्न असमर्थता, उनीहरूको गतिविधिको हिटम्यापहरू, साइट मार्फत तिनीहरूको गतिविधि ट्रेस गर्दै, र पनी साइटमा नामित आगन्तुकहरूको गतिविधि हेर्दै।
तपाईंको साइटमा वास्तविक समयमा गतिविधि पहिचान गर्दा तपाईंलाई जानकारीको आवश्यक हुन्छ तुरुन्तै परिवर्तन, डाटामा लामो स्पाइक्स तुरुन्तै अन्य पदोन्नतीहरू कार्यान्वयन गरेर, सामग्री परिमार्जन गर्दै जुन यसलाई प्रकाशन गर्ने केही घण्टामा काम गर्दैन ... सूची जारी रहन्छ।
सर्वेक्षण भन्छ: सोशल मीडिया मा समय खर्च सही समय खर्च छ
अगस्ट 19, 2011 मा 4: 16 AM
उल्लेखको लागि धन्यवाद डग। हामी सबै यसको बारेमा अलिकति हैरान छौं। भर्खरै हाम्रो ब्लगमा ट्याग गरियो र यो धेरै राम्रो छ। अर्को पटक सुरु हुने नयाँ अभियानको लागि यसलाई हेर्न प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न! दिन शुभ होस्।
अगस्ट 19, 2011 मा 4: 26 AM
यो एक उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो र अहिले Webtrends सँग भएका उत्पादनहरूको सुइटमा एउटा राम्रो सानो खाली ठाउँ भर्छ। तपाईं मान्छे अचम्मको हुनुहुन्छ!